दीपक मनाङेले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोप्रति एमाले सांसदले मागे जवाफ – हाम्रो देश
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विषयमा नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेशसभामा जवाफ मागेका छन् । मन्त्री मनाङेले आफ्नो लगानी युवाहरुलाई गरेको र त्यो आउन बाँकी रहेको बताएको भन्दै सांसद थापाले त्यसको वास्तविकता सभामार्फत जानकारी दिन माग गरेका हुन् ।
मन्त्री मनाङेले ‘मेरो सम्पत्तिबारे म आफैं कन्फ्युज छु । मेरो के छ ? के छैन ? जम्मै पहिलेको छोराछोरी, श्रीमतीको नाममा राखिदिइसकेको छु । मेरो भनौं भने मलाई एक आना जग्गा दिने पनि होइनन्,’ भनेका थिए ।
एमाले सांसद कृष्ण थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम सम्पत्ति वितरण राजकीय पदमा जाने जो कोहीले पनि ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको आचारसंहितामा पनि ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख रहेको उनले स्मरण गराए ।
मनाङेले यसअघि पनि २०७० सालमा अवैध सम्पत्ति राखेको आरोपमा मुद्दा खेपेका थिए । तर, २०७४ सालमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । उनले आफूमाथि प्रहरीले ‘रिस’ गरेर पहिलो पटक ‘मनी लाउन्ड्री’ मुद्दा लगाएको आरोप लगाएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्र बुढामगर ‘सागर’ले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । साउन ८ गते सपथ खाएका मगरको अझै ६० दिन पुग्न भने बाँकी छ ।